Akachipa CFL Chitima Tiketi Uye Mitengo Yekufamba | Chengetedza Chitima
Akachipa CFL Chitima Tiketi Uye Mitengo Yekufamba
musha > Akachipa CFL Chitima Tiketi Uye Mitengo Yekufamba
Pano unogona kuwana ruzivo rwese nezve Akachipa CFL matikiti ezvitima uye CFL mitengo yekufamba uye zvakanaka.
Topics: 1. CFL neTrain Highlights
2. Nezve CFL 3. Wepamusoro Insights Kuti Utenge Yakachipa CFL Chitima Tiketi
4. Matikiti eCFL anodhura zvakadii 5. Maitiro Ekufamba: Sei zvirinani kushandisa CFL zvitima, uye kwete kufamba nendege
6. Ndeupi mutsauko uripo pakati Pfupi nguva, uye Masikati Matikiti paCFL 7. Pane here kunyorera kweCFL
8. Inguva yakareba sei isati yasimuka yeCFL ini ndoda kusvika 9. Ndeapi marongero eCFL ezvitima
10. Ndeapi mahedhiyo anopihwa neCFL 11. CFL MIBVUNZO
CFL neTrain Highlights
Nechiyero chepamusoro chekuita 96%, CFL (Iyo yepamutemo Luxembourg njanji kambani) ndeimwe yevanonyanya kuvimba nechitima vanoshanda muEurope.
Makore ose, CFL inotora 25 mamirioni vanhu uye 105 mamirioni matani ezvinhu zvezvinhu kuyambuka kuenda kwavanoenda mukati meLuxembourg nekuEurope.
CFL ine hushamwari kwazvo nharaunda, CO2-yemahara, uye 100% yemagetsi avo ese anosvinudzwa kubva simba rinowanikwazve.
CFL ndiyo inopa hukuru hweLuxembourg yekufambisa sevhisi.
CFL, National Sosaiti yeLuxembourg Railways, rimwe zita reLuxembourg National Railways. Sezvo yakavambwa mukati 1946, CFL yakapa masevhisi ekufambisa kune vagari veLuxembourg.
CFL inopa njanji masevhisi mukati meLuxembourg uye neEuropean. Tiketi chaipo, unogona kushanyira zvese zvakanakisa nzvimbo dzekuzorora muEurope. Nemhando dzakasiyana dzematikiti, CFL inopa kune wese munhu zvido.
CFL inodzidzisa kazhinji njanji mitsara iri, Rukuzemubhogu – kweBrussels, Rukuzemubhogu – Paris, Ettelbruck – Liege, Wasserbillig- Dusseldorf. Unogona kusvika kune dzakavakidzana nyika mukati Europe uchishandisa CFL nezvitima: Furanzi, Jerimani, uye Belgium.
Kupfuura mubatanidzwa, 3,090 vashandi vanoshanda panjanji kuti vaone kuti mamwe mamirioni evatakuri anosvika zvakachengetedzeka kwavari kuenda zuva rega rega.
Enda ku Sevha Iyo Chitima Yeji kana kushandisa iyi yejeti kutsvaga anodzidzisa matikiti eCFL:
Wepamusoro Insights Kuti Utenge Yakachipa CFL Chitima Tiketi
nhamba 1: Bhuka matikiti ako eCFL pachine nguva pamberi paunogona
Mutengo we Matikiti ezvitima eCFL rinosimuka sezvo zuva rekufamba roswedera. Unogona kuchengetedza mari nekubhuka matikiti ako eCFL ezvitima kure nekukwanisika kubva pazuva rekuenda (Kazhinji 3 mwedzi iri pamberi ndiyo yepamusoro). Kugadzirira kwekutanga kunovimbisa kuti iwe unowana yakachipa pashiri CFL matikiti ezvitima. Ivo zvakare vakadzikira muhuwandu, saka kukurumidza iwe kuodha, zvakachipa kwauri. Kuti aponese mari paCFL matikiti ezvitima, tenga matikiti ako mangwanani.
nhamba 2: Kufamba neCFL panguva yekusiya-yepamusoro nguva
Sezvazviri neanose njanji anoshanda, Matikiti ezvitima eCFL ari zvakachipa panguva yekubhururuka-yepamusoro, pakutanga kwesvondo, uye masikati. Iwe unogona kuve nechokwadi chekuwana isingadhuri chitima matikiti mukati mevhiki. Musi weChipiri, Chitatu, neChina, Matikiti ezvitima eCFL ndiwo akanyanya mari. Nekuda kwehuwandu hwe mabhizimisi vafambi kuenda kubasa mangwanani nemanheru, matikiti ezvitima anodhura zvakanyanya muhuwandu hwenguva. Izvo zvakachipa zvakanyanya kufamba chero nguva pakati pekusvika mangwanani uye manheru manheru kuenda. Kupera kwevhiki ndiyo imwe nguva yepamusoro yezvitima, kunyanya neChishanu uye Mugovera. Mitengo yetikiti yetikiti yeCFL inowedzerawo pa zororo revanhu uye zororo rechikoro, uye mazororo echikoro muEurope anogona kugara 3 mavhiki nguva imwe neimwe.
nhamba 3: Odha matikiti ako eCFL kana iwe uine chokwadi nezve yako yekufamba nguva
Zvitima zveCFL vari kudiwa zvakanyanya, uye nemakwikwi mashoma, ivo parizvino vanoramba vari sarudzo yepamusoro yezvitima muLuxembourg. Ivo vanokwanisa kukwanisa kumisikidza tikiti rezvirambidzo senge iyo yavanayo inorambidza kuchinjanisa tikiti kana kudzoreredza kunze kwekunge iri Bhizinesi mhando yetikiti tikiti. Kunyangwe paine mamwe mawebhusaiti maunogona kutengesa matikiti ako echipiri ruoko kuvanhu, CFL haibvumire kutengeswa kwetikiti-kechipiri. Izvi zvinokubatsira sei kuchengetedza mari? Odha tikiti rako kana uine chokwadi nezvehurongwa hwako raizokuchengetedza kubva kubhuka tikiti rimwe kaviri nekuti chimwe chinhu chakauya uye waisakwanisa kushandisa iyo yekutanga yatengwa tikiti.
nhamba 4: Tenga matikiti ako eCFL paSave A Train
Sevha Chitima chine chikuru, zvakanakisa, uye zvakachipa zvinodhura matikiti ezvitima muEurope. Hukama hwedu hwakanaka nevazhinji vanoita njanji, Ndeapi matiketi echitima, uye ruzivo rwedu rwehunyanzvi algorithms anobatanidzwa, tipe mukana wekutenga yakachipa pashiri yetikiti. Isu hatisi kungopa zvakachipa zvechitima zvetiketi zveCFL chete; isu tinopa zvakafanana kune dzimwe nzira dzeCFL.
Luxembourg kuenda kuColmar Chitima Mitengo
Matikiti eCFL anodhura zvakadii?
Public chokufambisa mukati me Grand Douchy weLuxembourg dzimwe nguva yakasununguka uye dzimwe nguva haina, zvinoenderana nenzira uye kana uri mugari wenyika. zvisinei, 1st kirasi pazvitima zveCFL, nguva dzose inodhura mari, asi zvakare haisi sarudzo inodhura. Matikiti ezvitima eCFL anotanga kubva ku € 3 kusvika ku € 6 kwerwendo rwechitima chimwe chete. The mutengo wetikiti reCFL rechitima zvinoenderana nerudzi rwetiketi raunotenga uye paunosarudza kufamba:
Ipfupi-Nguva € 3
Zuva-Tiketi € 6
Maitiro Ekufamba: Sei zvirinani kushandisa CFL zvitima, uye kwete kufamba nendege
1) Unogara Uchisvika kuCity Center. Uku ndiko kumwe kubatsira kwezvitima zveCFL kana zvichienzaniswa nendege. Zvitima zveCFL uye zvese zvimwe kufamba kwechitima kubva chero kupi muguta kusvika pakati peguta rinotevera. Izvo zvinokuchengetedza iwe nguva uye mutengo wekeji kubva kuairport kuenda kuguta. Nezitima zvinomira, zviri nyore kuti uende chero kupi zvako muguta rauri kuenda. Hazvina basa kuti uri kubva kupi uchibva, kweBrussels, Nancy, Paris, kana Amsterdam, Guta rinomira riri mukana wakakura wezvitima zveCFL! Semuyenzaniso, Luxembourg Airport iri 20 maminetsi kure neguta.
2) Kufamba nendege kunoda kuti iwe uve panhandare nendege 2 maawa usati watiza nguva. Iwe unofanirwa kuenda nekuongororwa kwekuchengetedza usati watenderwa kukwira ndege. Nezvitima zveCFL, iwe unofanirwa kunge uri pachiteshi zvishoma pane 30 maminitsi pamberi. Kana iwe ukafungawo nezvenguva iyo zvinotora iwe kuenda kubva kuairport kusvika pakati peguta, unozoona kuti zvitima zveCFL zviri nani mukati mazwi ehuwandu hwenguva yekufamba.
3) Matikiti ezvitima eCFL akadhura kunyangwe kana uchiaenzanisa iwo kumatikiti emhepo. Uyezve, kana uchienzanisa zvese zvinopomerwa zvinosanganisira, Matikiti ezvitima eCFL ane kunyange mutengo uri nani. Nezvimwe mutengo semabhadharo echikwereti aunofanirwa kubhadhara kuzvitima, kufamba neCFL ndiye akanakisa.
4) Zvitima zvine zvakatipotera Hushamwari. Mukuenzanisa pakati pezvitima nendege, zvitima zvaizogara zvichibuda pamusoro. Ndege dzinosvibisa mhepo nemhepo yakadzika kwazvo. Zvitima mukuenzanisa zvinopa kunze Carbon 20x zvishoma pane ndege.
Ndeupi mutsauko uripo pakati Pfupi Nguva, uye Zuva Tikiti paCFL?
CFL ine mhando dzakasiyana dzematikiti emabhajeti akasiyana uye nguva yekufamba: ingave bhizinesi kana zororo. Unogona kuva nechokwadi chekuti imwe yeaya matikiti angave akakodzera kune yako yekutanga kirasi rwendo rwekuyambuka Luxembourg paCFL yenyika zvitima.
Ipfupi Nguva CFL Matikiti:
Iyo pfupi-yenguva tikiti inoshanda kune 1 kirasi chete ye 2 maawa kubva panguva yekusimbiswa. Unogona kufamba pane CFL chitima samambure pasina chero zvirambidzo asi funga nezvechitima nguva yekusvika kwainosvika, zvinoenderana nenguva. Kana iwe uchifanira kufamba pane pfupi chiziviso, iwe unofanirwa kuwana iyi tikiti. Hauna kuganhurirwa kune chimwe chitima, uye unobvumidzwa kusarudza chinongedzo chako.
CFL Masikati Matikiti:
Matikiti eCFL ezuva akareba-enguva yekutanga kirasi matikiti, uye zvinoshanda kubva panguva yekubuda kusvika 4 ndiri zuva rinotevera. Iwe unogona kutenga iyo CFL Day tikiti tikiti kubva kune tikiti muchina, Hofisi yematikiti, kana Chengetedza Chitima.
Pane here kunyorera kweCFL?
Public chokufambisa, kusanganisira akasarudzwa masevhisi eCFL, mukati meLuxembourg, yakasununguka. saka, hapana chikonzero chekubhadhara kweCFL, kunze kwekunge iwe uchida kufamba 1st kirasi. Vagari veLuxembourg vanowanzo famba vachidarika muganhu kuenda kuFrance, unogona kunakirwa neFlexway 1st kirasi pamwedzi kupfuura, nokuti 85 €. Pamusoro pe, Vagari veLuxembourg vanogona kunakidzwa nemitengo yakaderera pamatikiti emwedzi kuenda kuGerman. Saka kwaunogona kuwana rumwe ruzivo nezve izvi?
– CFL tikiti kuverenga.
– Pafoni yeCFL yebasa revatengi 2489 2489
Inguva yakareba sei isati yasimuka yeCFL ini ndoda kusvika?
Zvakaoma kutaura chokwadi kune wechipiri, asi Sevha Chitima inokurudzira kuti iwe unosvika nezve 30 maminitsi nguva yako yekuenda isati yasvika. Nenguva ino, iwe zvakare uchave nenguva yakakwana yekutenga zvinhu zvaunoda ita wako chitima rwendo sezviri nyore sezvinobvira.
Ndeapi marongero eCFL ezvitima?
Luxembourg kuCologne Chitima Mitengo
Luxembourg kuKoblenz Chitima Mitengo
Ndeapi mahedhiyo anopihwa neCFL?
Chiteshi cheLuxembourg cheCFL chiri paPeace de la Gare iyo iri pakati peguta.
MuTroisvierges, Zvitima zveCFL ibva uye usvike kubva kuchiteshi cheTroisvierges chiri pamutsetse 10, kubatanidza guta reLuxembourg kuchamhembe kwenyika. Troisvierges inogara kumakomo maviri akakwirira muLuxembourg.
Zvitima zveCFL zvinobvawo zvonosvika kuNancy guta muFrance. Zvitima zveCFL zvinobva kuLuxembourg Central chiteshi kuenda kuNancy yega 1 awa.
Unogona kuwana iyo Flanders muBelgium nechitima kufamba kubva kuLuxembourg kuenda kuGhent uye / kana Brussels. Zvitima zveCFL zvinobva awa yega yega kubva kuLuxembourg kuenda kumaguta anoshamisa eBelgium uye anonakidza madhorobha ekare muEurope.
Vari Bikes Inobvumidzwa PaBhodhi iyo CFL Zvitima?
Mabhasikoro anotenderwa pazvitima zveCFL mahara, uye sekureba sekuzvichengeta kwavo munzvimbo dzakatarwa dzemabhasikoro. Iwe unogona kuwana iwo emabhasiketi ekuchengetedza nzvimbo nenzvimbo yekumaka green paCFL madhoo.
Do Vana Vanofamba Mahara paCFL Zvitima?
Ehe, asi chete kusvika kunguva ye 12 makore. Vana vadiki pane 12 makore, vanogona kufamba mahara kana vachiperekedzwa nemunhu mukuru kudarika zera re 12, ine tikiti inoshanda uye kadhi rekuzivisa.
Ndezvipfuwo Zvinotenderwa paCFL Zvitima?
Ehe, CFL inoda imbwa dzese saizi uye idzi 4 makumbo vanhu vanogona kufamba mahara pazvitima zveCFL. Imbwa dzinofanirwa kuve pamusoro uye hadzitenderwe kugara pazvigaro.
Ndeapi ma boarding maitiro eCFL?
Wese mufambi anofanirwa kupa tikiti inoshanda uye kadhi rekuzivisa. Kana iwe wakarasa tikiti rako rechitima kana wanga uchikurumidza, uye handina kutenga tikiti pamberi, unogona kuzviita muchitima, kubva kuvamiriri veCFL.
Yakawanda Inokumbirwa CFL FAQ – Ndinofanira here kuraira chigaro pamberi paCFL?
Aihwa, hapana chekuchengetedza zvigaro paCFL yenyika kana epasi rose zvitima, unogara paunenge uine nzvimbo yemahara, uye iwe uchagara uine nzvimbo yemahara kana iwe wakatenga tikiti rechitima pamberi.
Iko kune internet yeWi-Fi pazvitima zveCFL?
Aihwa. Unogona kunakidzwa Yemahara yeWi-Fi internet pane yakasarudzwa CFL zvitima zviteshi, asi Wi-Fi haiwanikwe pazvitima zveCFL.
Luxembourg kuEttelbruck Chitima Mitengo
Ettelbruck kuenda kuJunglinster Chitima Mitengo
Mersch kuLuxembourg Chitima Mitengo
Clervaux kuLuxembourg Chitima Mitengo
Kana iwe wakaverenga kusvika panguva ino, unoziva zvese zvaunoda kuti uzive nezvezvitima zveCFL uye wakagadzirira kutenga yako CFL chitima tikiti cherwendo rwako ruri kuuya Chengetedza Chitima.
Iwe unoda here kubatidza peji ino kune yako saiti? Click pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-cfl%2F%0A%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code), Kana kuti unogona kungobatanidza zvakananga kune ino peji.